Ona-53 ukhumule wanqunu obesolwa ngokweba izicathulo esitolo | isiZulu
Ona-53 ukhumule wanqunu obesolwa ngokweba izicathulo esitolo
Uthole 'amaswidi' esitimeleni owebe iselula yowesifazane
Owebe elocansi uthe kungcono 'azisize' kunokungathembeki
Uthi 'ubeshaywa' yisikhathi owebe ibhasi
Johannesburg - Owesifazane oneminyaka engu-53 ubudala kusolwa ukuthi uphoqwe umuntu osebenza esitolo sezingubo zokugqoka ukuba akhulume abenqunu ngezinsolo zokweba izicathula.
Lo wesifazane uthe uhlazekile ngemuva kokukhokhela izimpahla zokugqoka zemali engu-R1 500 abezithengela indodakazi yakhe esitolo iThe Fix esaziwa ngoFasshion Express enxanxathela yezitolo iWestgate eRoodepoort ngomhlaka-25 Juni.
OLUNYE UDABA: Uboshiwe owebe i-KFC nomsakazo emotweni ekapa
ULettia Mokoena uthe umiswe ngomunye wabasebenzi besitolo obemsola ngokweba.
"Uthe ngebe izicathulo. Ngavuma ukuba angiseshe wase engiholela egumbini lokulinganisa izingubo," usho njalo.
UMokoena uthe ucelwe ukuba akhumule impahla abeyigqokile asale ngesudi yesele.
"Wathi angikhumule ilokwe lami, i-tight nedilozi ekhuluma kabi nami. Ethi yena uyawazi umsebenzi wakhe wakufundiswa kahle akwenzayo,"usho njalo.
UMokoena uphinde wathi akugcinanga lapho njengoba ephinde wathi akakhumule nokokusubela(pad) njengoba ebesesikhathini.
"Wathi angiyikhiphe nayo, ngavele ngama ngamubuka. Ngahlanganisa amathanga ukuze ingeke iwe phansi. Wangihlukanisa amathanga ngezandla zakhe wangathola luthi, wase ethi sengingakhululeka."
Imenenja yesitolo uNono Keabaitsi uthe ukukhumulisa amakhasimende asolwa ngokweba akusiyo ingxenye yomgomo wabo.
"Akwenzile akulungile. Ngizamile ukuxolisa kwikhasimende lethu ngesikhathi lifika nendodakazi yalo lizofaka isikhalo kodwa belingezwa lutho njengoba belithukuthele," kusho uKeabaitsi.
"Ngizolulandela udaba nabaphathi abakhulu ukuze ngizothola ukuthi kungani engazithatha izinyathelo.
UMokoena uthe lo wesifazane nabesitolo abazange batshengise ukuzisola.
Okhulumela amaphoyisa esifundazwe eGauteng uLieutenant-Colonel Dlamini akahambisananga anamaphoyisa wathi udaba luzophenywa, kubika iSowetanLive.
"Amaphoyisa akufanele anqabe ukuvula icala. Isisulu sifanele ukukhala kumphathi wesiteshi omkhulu, kanti uma kutholakala ukuthi amalungu awubalekele umsebenzi, kuzophenywa icala lokungaziphathi kahle."